Fil d'actualités du 14/06/2019
14/06/2019 - 16:00 : Namoahana filazana fikarohana i Rtoa Ravelohanitra Nirina noho ny fivadiham-pitokisana miaro fisolokiana. Marihina moa fa depiote HVM ny tenany nandritra ny fe-potoam-piasana 2014 -2019.Tsahivina fa mbola nirotsaka hofidiana izy tamin'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo saingy amin'ny alalan'ny tsy miakina tao Antsirabe II.
14/06/2019 - 15:50 : CENI:Efa manomana ny fifidianana ben'ny tanàna sahady ry zareo eo anivon'ny CENI izay vinavinaina ho tanterahina ny volana septambra 2019 ho avy izao.
14/06/2019 - 15:45 : JIRAMA:Hisy fahatapahana ny JIRO ny Sabotsy 15 Jona 2019 manomboka amin’ny 10ora maraina hatramin’ny 2ora tolakandro amin’ireto faritra manaraka ireto:TOMBONTSOA- TSARAFIRAISANA- ANTSAHA- AMBATOMAINTY- ANDRANOLANELATRA- TSARAMANDROSO- ANTSAPANIMAHAZO NORD- SAMBAINA- AMBOHIBARY- AMBATONDRADAMA- FARAVOHITRA- ANTSAMPANIMAHAZO FARATSIHO- FARATSIHO Antony: Fametrahana « Transformateur » vaovao eny SVD TSARAVAVAKA-ANTANETIBE.
14/06/2019 - 15:30 : BASE TOLIARA:Navotsotry ny fitsarana ireo olona 9 voarohirohy tamin'ny raharaha base de Toliara.
14/06/2019 - 15:00 : LALANA TAPAKA : Noho ny asa fanamboaran-dàlana dia voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra ny ampahan-dàlana PK3+450 (Ambodivonkely-Route du Pape) hatreo amin'ny PK6+000 (Station Jovena-Ambodimita) manomboka ny alatsinainy 17 jona ka hatramin'ny 29 jolay.
14/06/2019 - 14:30 : KUNG FU WUSHU:delegationina Sinoa 8 no tonga hiara-hiasa amin’ ny Komity olympika malagasy ny MJS Nigadona, omaly teny amin’ny seranampiaramanidina Ivato, ireo delegasiona miisa valo avy amin’ny minisitera sinoanan’ny fanatanjahantena,notarihin’andriamatoa Wang Ping,filohan’ny delegasiona. Nitsena azy ireo Rakotozafy Rosa sy ny maitre Gao. Handinika izay hampandrosoana nyfanatanjahantena malagasy ireto delegasiona ireto raha ny fanazavan’ny maître Ramaherison José, fantatra amin’ny anarana hoe “Mtre Gao”, filohan’ny federasiona malagasy ny kung fu wushu. Hihaona mivantana amin’andriamatoa minisitra izy ireo ho amin’ny anio, hanapaka izay azo hiarahamiasa mandritra ny efatra andro hijanonany eto Madagasikara. Hifampiresaka amin’ny Komity olympika malagasy ihany koa ireto delegasiona sinoa ireto, raha ny fanazavana hatrany. Marihina fa avy eo anivon’ny minisitera sy ny orinasam-panjakana sinoa, ahitana ihany koa ny avy eo anivon’ny China Sport ireto delegasiona manan-kaja ireto. Ny orinasa “China Sport” izay nanampy betsaka an’i Madagasikara tamin’ny fandefasana ireo atleta niofana tany Sina, ny taon-dasa. Voninahitra lehibe ho an’i Madagasikara sy ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena izao fahatongavan’ireto iraka manokana sinoa ireto, raha ny nambaran-dramatoa tale Jeneralin’ny fanatanjahantena, Rakotozafy Rosa, omaly, teny Ivato. Nisaotra ihany koa an-dRamaherison José ity farany satria anisan’ny angady nananana izao fiarahamiasa izao ity filohan’ny federasiona ny kung fu wushu ity.
14/06/2019 - 14:00 : KOLIKOLY:Zandary telo indray no nosamborina tamin'iny làlana RN4 iny izay voalaza fa tratra nanao kolikoly.
14/06/2019 - 12:00 : FETE DE LA MUSIQUE : Noho ny fankalazana ny "Fête de la Musique" dia ho tapaka ho an'ny fiara rehetra ny lalana Allée des palmiers eo Antsahavola, eo amin'ny lalana 77 Solombavambahoaka frantsay, ny alakamisy 20 jona ka hatramin'ny sabotsy 22 jona manomboka amin'ny 5 ora maraina hatramin'ny 11 ora alina.
14/06/2019 - 11:30 : FETIN'NY RAY:Ho fanomanana ny fetin'ny Ray amin'ny Alahady izao dia misy ny hetsika manokana ataon'ny Top Radio rahampitso manomboka amin'ny 8ora sy sasany ko manasa anao ary ihaino ny Top radio fa mety hisy ny mahasoa anao anomananao fanomezana ho an'i Dada.
14/06/2019 - 11:00 : JIRAMA:Ny JIRAMA dia manao izao fampadrenesana izao:Hisy fahatapahana ny famatsiana RANO hoan'ny anio faha 14 Jona manomboka amin'ny 9 ora maraina ka atramin'ny 6ora ariva amin'ireto toerana ireto:Manaritsoa Atsinananana – Anatihazo – Andavamamba.Antony : Asa fikojakojana ny hidin-drano eny Ampefiloha. Raha vao vita ny asa dia hiverina tsikelikely ny famatsiana RANO.Ny JIRAMA dia miala tsiny amin'ny mety ho fanelingelenana aterak'izany ary misaotra antsika rehetra amin'ny faharetana.
Archive du 20181023
Marc Ravalomanana « Misy fetrany ny azo ekena … »
Nampahafantarin’i Marc Ravalomanana tamin’ny mpanao gazety omaly alatsinainy 22 oktobra ireo mpiara-miasa aminy akaiky.
Biletà tokana voamarika Nitondra fanazavana ny CENI
Manoloana ny fiparitahan'ny biletà tokana efa voamarika hita eny amin'ny tambajotra serasera, dia nilaza ny handray fepetra hentitra ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI),
Praiminisitra Ntsay Christian Tsy nahatontosa ny andraikitra nomena azy
Niaiky ny CENI Madagascar fa maro ny lesoka amin'ny fifidianana, toy ny lisi-pifidianana...
Rivo Rakotovao « Aleo hifidy aloha isika ! »
Naneho ny heviny mikasika ny fahitany ny adihevitra nifanaovan’ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana na ny CENI sy ireo kandida ho filoham-pirenena niseho ny zoma teo omaly ny filoham-panjakana,
Mpitondra vaovao eto Madagasikara Iankinan’ny fanarenam-pirenena
Miha goavana hatrany ny kihon-dalana lalovan’i Madagasikara tao anatin’ny tantara rehefa mijery ny fiainana politika nolalovantsika tao anatin’ny 60 taona.
Manjakandriana, Anosibe an’Ala, Mahanoro,… Mahatoky an’i Dada ny vahoaka
I Manjakandriana no nanombohan’i Marc Ravalomanana ny fampielezan-kevitra omaly. Mahatoky sy mino aho fa tsy miova ny fifampitokisana eo amintsika.
Fandehanana mifidy Sahia mijoro sy mandray andraikitra
Fampielezan-kevitra Takon`ny fampiasam-bola
Tao anatin`ny herinandro roa nisian`ny fampielezan-kevitra, hita taratra fa ilana vola sy fitaovana goavana ny fandraisana anjara amin`ny fifidianana.
Ady amin’ny fanandevozana Hodinihina etsy Anosy
Ny 25 oktobra izao no hotontosaina etsy amin’ny Carlton Anosy ny atrikasa handinihana ny fivoaran’ny ady amin’ny fanandevozana maoderina sy tsy fanajana zon’olombelona ary ny fampiasana zaza tsy ampy taona.
Baolina kitra any Bongolava Anio talata vao tena hotanterahina ny fifidianana ligy
Anio talata 23 oktobra 2018 vao tena hotanterahina ny fifidianana mpitantana ny rafitra ligim-paritry ny baolina kitra any Bongolava fa omaly alatsinainy 22 oktobra kosa dia ny fifidianana filohan’ny
Tonga ny fotoana na hoe “Time is now.”, hoy ry zareo anglisy. Kandida ho filoham-pirenena maromaro no nanamafy izay. Fotoana hanaovana inona anefa ?
Imbiky Herilaza “Manahy aho fa tsy hoeken`ny rehetra ny voka-pifidianana”
Fototry ny olana amin`ity fifidianana 2018 ity ny lisi-pifidianana. Mazava ny voalaza ao anatin`ny and.
Fianarana aorian’ny bakalorea Sahirana misafidy ireo mpianatra
Nampahafantarina omaly Alatsinainy 22 Oktobra teny amin’ny efitranon’ny filohan’ny Anjerimanontolo ny fisian’ny hetsika fampiratiana natokana ho an’ny mpianatra “Salon de l’étudiant Edition 2018”
Akademia Malagasy Nomarihana ny faha-100 taonan’i ED Andriamalala
iantsana ny asa sorany nataon’ireo mpiantsa tononkalon’ny Havatsa-Upem sy fihirana ny tononkalo nosoratany ary vela-kevitra nataon’ny mpampianatra mpikaroka 2 vavy no nentina nanamarihana ny faha-100 taona nahaterahan’ilay mpanoratra malaza ED Andriamalala
TSY EKENA NY FANEMORANA NY FIFIDIANANA
Tsy manaiky ny hanemorana ny fifidianana ny kandida Marc Ravalomanana fa tsy araka ny feo mandeha sy aelin’ireo mpanaratsy amin’izao fotoana.
LUCIANO, 25 taona : Tsy hita popoka efa ho iray volana izao
Tsy hita popoka ny tovolahy iray mpianatry ny sekolim-panjakana Cntemad, monina eny Ambohimirary Ampasampito, Ratiarison Maheriniaina Luciano.
Sehatra tsy miankina Hanao latsakemboka hanaovana fampiofanana arak’asa
Natao tetsy Ampefiloha omaly alatsinainy 22 oktobra ny fifanaovan-tsonia niarahan’ny minisiteran’ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak’asa tamin’ny sehatra tsy miankina momba ny latsakemboka Malagasy ho an’ny fanofanana arak’asa.